Bit By Bit - လေ့လာခြင်းအပြုအမူ - 2.3.2.7 ထိခိုက်မခံတဲ့
ကနျြးမာရေးအာမခံကု​​မ္ပဏီတွေဟာသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များကလက်ခံရရှိသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များရှိသည်။ ဤအချက်အလက်သည်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်. အရေးကြီးသောသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့်အများပြည်သူဖြစ်လာခဲ့သည်လျှင်အလားအလာစိတ်ခံစားမှုထိခိုက်မှုတွေ (ဥပမာ, အရှက်) နှင့်စီးပွားရေးထိခိုက်မှု (အလုပ်အကိုင်ဥပမာ, အရှုံး) မှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ ဝေးထူးခြားတဲ့မှများစွာသောကြီးမားသောဒေတာသတင်းရပ်ကွက်များအထိခိုက်မခံကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှိသည်။ ဤအချက်အလက်များ၏ထိခိုက်မခံတဲ့သဘာကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရပ်ကွက်များမကြာခဏ (အထကျဖျောပွထား) တပိုင်တနိုင်သောအကြောင်းပြချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သုတေသီများဤအခြေအနေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားကြောင်းတစ်ခုမှာလမ်းဖယ်ရှား-ဖော်ထုတ်ရန်ထိခိုက်မခံတဲ့သတင်းအချက်အလက်များရှိသည်သောဒေတာအစုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သကဲ့သို့ငါအခန်း6(Ethics) တွင်အသေးစိတ်အတွက်အလေးအနက်ကျယ်ပြန့်သည့်လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဒေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေနှစ်ဦးစလုံးကသဘောကျကြသည်မဟုတ်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာကန့်သတ်ထားသည်ဤချဉ်းကပ်မှုပုံစံကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
နိဂုံး, ကြီးတွေဒေတာယနေ့သတင်းရပ်ကွက်များ (နှင့်မနက်ဖြန်) တွင်ယေဘုယျအားဖြင့်တကျိပ်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ အမြဲ-on ကောင်းကျိုးဂုဏ်သတ္တိများ-ကြီးတွေအတော်များများနှင့်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုးရများအတွက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှ nonreactive-လာယခင်ကမဖွစျနိုငျကွောငျးကိုတစ်စကေးမ​​ှာဒေတာစုဆောင်းဖို့နိုင်ကြသည်။ နှင့်အညီ, မကောင်းတဲ့ဂုဏ်သတ္တိများ-မပြည့်စုံ, လက်လှမ်းမမှီ, Non-ကိုယ်စားလှယ်အများတို့သည်လည်းမျော, Algorithm ကိုညစ်ပတ်, လက်လှမ်းမမှီ, ရှက်ကြောက်လျက်, data ကိုသုတေသီများအဘို့အသုတေသီများအားဖြင့်ကောက်ယူသည်မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှအထိခိုက်မခံ-လာကြ၏။ ဤအသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုနားလည်ခြင်းကြီးမားတဲ့ဒေတာမှလေ့လာသင်ယူရန်လိုအပ်သောပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ကြသည်။ နှင့်အညီ, ယခုအခါငါတို့သည်ဤအချက်အလက်နှငျ့အသုံးပွုနိုငျမဟာဗျူဟာသုတေသနမှလှည့်။